नेपाल आज | भैरहवा नाकामा अहिले भारतीय पक्षले निर्वाधरुपमा सामान भित्रिन दिएको छैन (भिडियोसहित)
भैरहवा नाकामा अहिले भारतीय पक्षले निर्वाधरुपमा सामान भित्रिन दिएको छैन (भिडियोसहित)
बिहिबार, २२ भदौ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
डा. शान्तकुमार शर्मा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपाल
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमा अघोषित ‘नाकाबन्दी’ लगायो । दसगजा क्षेत्रमै पनि आन्दोलनकारी धर्नामा बसेकाले भारतबाट नेपालमा सामानहरु निर्वाधरुपमा भित्रिन सकेनन् । एक महिना होइन दुई महिना होइन, झण्डै ६ महिना नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको समस्या बेहोर्नुपर्‍यो । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका अधिकाँश नाकामा नाकाबन्दी भएपनि सुनौली नाकालाई भने नाकाबन्दीले छुन सकेन ।
तत्कालीन मधेसी मोर्चाले निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको सुनौली नाकाका कारण आफूहरुको आन्दोलन असफल हुन लागेको भन्दै त्यहाँ पनि नाकाबन्दी गर्न खोजे, तर भैरहवाका उद्योगी व्यवसायी र स्थानीयले डटेर विरोध गरे । त्यसैले त्यहाँ पनि नाकाबन्दी लगाउन खोज्ने मधेसी मोर्चाको प्रयास पूर्ण असफल भयो ।
वास्तवमा भन्नै पर्छ, यदि सुनौली नाकामा पनि नाकाबन्दीको प्रभाव परेको भए नेपाली जनताले ठूलो समस्या भोग्नु पथ्र्याे । तर त्यहाँका सचेत उद्योगी व्यसायी र स्थानीय वासिन्दाका कारण त्यही नाकाबाट नेपालमा सामानहरु भित्रिन सफल भयो । पूरै नाकाबन्दीको समय भर नेपाली जनतालाई सुनौली नाकाले थेग्ने काम गर्‍यो ।
तर, यस्तो ऐतिहासिक महत्व बोकेको सुनौली नाकाले अहिले विविध समस्याहरु भोग्नु परिरहेको छ । यी समस्याले निरन्तरता पाए यहाँका उद्योगी व्यवसायी आगामी दिनमा पलायन नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यसैले हाल देखिएका समस्या तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हामीले भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. शान्तकुमार शर्मासँग अहिले सुनौली नाकाले भोग्नु परिरहेका समस्याबारे कुरा गरेका छौं । आफ्ना विचार स्पष्टसँग भन्न सक्ने डा. शर्मा भन्छन् :
भैरहवा नाका अर्थात् फरटाइल नाका
आर्थिकरुपमा भैरहवा नाका अत्यन्तै फरटाइल मानिन्छ । यो भैरहवा नाका (सुनौली) नाका यस्तो नाका हो, जुन नाका भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि निर्वाधरुपमा सञ्चालनमा आयो । नाकाबन्दी लगाउने प्रयासलाई यहाँका उद्योगी व्यवसायी र स्थानीय वासिन्दाले बिफल बनाइदिए । यो भैरहवा नाका नेपालकै लाइफलाइन नाका पनि हो । भारतको राजधानी यहाँबाट नजिक पर्ने हुनाले यहाँबाट सामान ल्याउँदा पनि सस्तो पर्छ । तर यो नाकाले ३, ४ महिनादेखि समस्या भोग्नु परिरहेको छ । पहिला दैनिक ८, ९ सय ट्रक सामान नेपाल आउने गरेकोमा अहिले भारतीय पक्षले कडाइ गरेकाले तीन, चार सयमा झरेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख र झन्झट पाइरहेका छन् । यो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहे उद्योगी व्यवसायी पलायन नहोलान् भन्न सकिन्न । अहिले दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ राजस्वमा कमी आइरहेको छ ।
१०, ११ किलोमिटर टाढासम्म ट्रक कन्टेनरको लाइन
भारतले सुस्तगतिमा सामान छाड्दा त्यसको भार उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्ताले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । पहिला भारतीय सीमासम्म ल्याइएका सामान एक दुई दिनमै भैरहवा भन्सारसम्म ल्याउन सकिन्थ्यो । अहिले १० देखि १५ दिनसम्म लाग्ने अवस्था देखिएको छ । झण्डै १०, ११ किलोमिटर टाढासम्म ट्रक कन्टेनरको लाइन लागिसकेको अवस्था छ । यो अवस्था आउनु भनेको दुर्भाग्य हो ।
भारतीय प्रहरीले हदैसम्मको दुःख दिन थाले, पैसा नखाई ट्रक कन्टेनर छाड्दैनन्
समस्या बढ्दै गएपछि हामीले सुरुमा हाम्रा सिडियो र प्रहरी प्रशासनसमक्ष आफ्ना कुरा राख्यौं । त्यसपछि भारतीय प्रहरी र भारतीय कष्टमसँग पनि कुरा राख्यौं । उहाँहरुले सुरक्षा र आतंककारी गतिविधिको कारण देखाउँदै माथिको निर्देशनमा केही कडाइ गरिएको र बिस्तारै सहज हुने जवाफ दिनुभयो । तर, यति लामो समय बित्दा पनि सहज हुन सकेको छैन । हामीले पछिल्ला दिनमा पनि भारतीय प्रहरी र कष्टमसँग कुरा गरिरहेका छौं । तर उनीहरुबीच नै समन्वय देखिएन । समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्ष गम्भीर भएको हामीले पाएनौं । अहिले त प्रतिट्रक/कन्टेनर एक हजार, १५ सय रुपैयाँ लिएर छाड्न थालेका छन् । यो त अति नै भयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा यसले निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने डर छ ।
जीएसटी र एक्जिम कोडका कारण पनि समस्या
वास्तवमा भारतले जीएसटी लगाएको एक दुई दिनमै नेपालले पनि एक्जिम कोड लगायो । यसले पनि सामान निर्यातमा असर पर्‍यो । एक्जिम अर्थात एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट कोड लिन पनि व्यवसायीलाई समय लाग्यो । एक्जिम कोड नलिइकन अब व्यवसायीले भारबाट सामान ल्याउँन पाउँदैन । कर नियन्त्रणका लागि पनि नेपाल सरकारले एक्जिम कोड लागू गरेको हो ।
सीमा व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्छ
हो, नेपाल र भारतको १७ सय किलोमिटर भूभाग खुला छ । भारतले पछिल्ला दिनमा आफ्नो सीमा व्यवस्थित गर्न लागिरहेको छ, तर हामीले गर्न सकेका छैनौं । खुला सीमानाकै कारण तस्करी पनि बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हो ।
निश्चय नै, भन्सार तिरेर ल्याएको सामान र भन्सार छली गरेर ल्याएको सामानको मूल्यमा फरक हुन्छ । भन्सार छली गरेर ल्याइएका सामान सस्तो पर्न जान्छ । यसले पनि व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको छ । त्यसैले भन्सार भन्दा अन्य ठाउँबाट अर्थात् चोरबाटोबाट सामान ल्याउने कार्यलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्काे कुरा, सरकारले सीमाक्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिवधि रोक्न सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ । तर उनीहरुको परफरर्मेन्स राम्रो देखिएको छैन । चोर बाटोबाट सामान भित्रिरहँदा पनि उनीहरुले रोक्न सकेका छैनन् । कतै उनीहरुको पनि संलग्नता छ कि भनेर किन आशंका नगर्ने ?
सुरक्षा जाँचका नाममा यो के गाईजात्रा ?
सुरक्षा जाँचका नाममा भन्सार कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जाँच गर्ने गर्छन् । भन्सार गेटमा छिरेपछि उनीहरु सबैले चेक गर्छन् । सबैले चेक गर्दा आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्काे कुरा, सबै जना एकै ठाउँमा चेक गर्न आउँदा ट्राफिक समस्या पनि आउने गरेको छ ।
यस्तै दुई किलोमिटरको दूरीमा ट्राफिक प्रहरी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले फेरी चेकिङ गर्छन् । यसले अनावश्यक समस्या भोग्नु परिरहेको छ । एकै ठाउँमा राम्रोसँग चेकिङ गर्‍यो भइहाल्यो नि ? किन गर्नु पर्‍यो ठाउँठाउँमा चेकिङ ? यो विषयमा हामीले प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमै भेटेर पनि कुरा गरिसकेको छौं । उहाँले सकारात्मक जवाफ दिनु भएको छ ।
किन हान्नु पर्‍यो आतंकवादी रुपमा छापा ?
हो, कसैले गलत काम गरेको छ भने छापा मार्ने अधिकार सरकारलाई छ । हामी त्यसको विरोधी पनि होइनौं । तर अहिले जसरी छापा मार्ने काम भइरहेको छ, हामी त्यसको भने विरोधी हौं । व्यवसायीलाई आतंकित पार्नेगरी, उनीहरुको मानमर्दन हुने गरी अहिले छापा मार्ने काम भइरहेको छ । यसलाई तुरुन्त सच्याउनु पर्छ । छापा मार्नै छ भने उद्योगी व्यवसायी, संघ संस्थाका प्रतिनिधिलाई राखेर छापा मार्नुपर्छ । आतंकवादी शैलीले होइन ।
Dr. Santa Kumar Sharma
काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार
विराटनगरका उद्योगी/ब्यवसायीले मागे अर्थमन्त्रीको राजिनामा
बिहिबार, ०९ असार २०७९
अर्थमन्त्रीलाई राजिनामा दिन प्रचण्डको निर्देशन